Madaxtooyada Puntland oo war kooban ka soo saartay shirka wada-tashiga DFS iyo dowladaha xubnaha ka ah – Kalfadhi
Magaalada Garowe waxaa goor dhowayd si rasmi ah uga furmay shirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ah, kaas oo beryahan qaban-qaabadiisu socotay. Madaxweyne Farmaajo ayaa guddoominaya.
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland lagu sheegay inuu yahay shir wada-tashi ah oo u dhexeeya dhinacyadaas, lama sheegin arrimaha aad loogu lafa-gurayo shirka.
Madaxtooyada Puntland ayaa horey u iclaamisay shirkan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’isal wasaarihiisa Xasan Cali Khayre ayaa qayb ka ah shirka oo ay joogaan madaxda dowlad-goboleedyadu.
Waa kulan ka duwan kuwii hore, furitaanka shirkana kama aysan muuqan madaxda iyo siyaasiyiinta kale ee dowladda FS iyo dowladaha xubnaha ka ah ka tirsani.
Mudo ku dhow laba toddobaad waxaa Garowe ku sugan xildhibaanada aqalka sare ku metela Puntland oo markii ay Garowe yimaadeen walaac ka muujiyay amniga, dhamaystirka dastuurka iyo halka uu dalku u socdo 2021.
Waxay sheegeen in ay la kulmi doonaan xukuumadda iyo wakiillada Puntland, laakiin arrimahaas weli wax miro-dhal ah kama aysan qabsoomin, waxaana toddobaadkii u dambeeyay xoogga la saaray qabsoomidda shirkan.
Xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamanka Soomaaliya ayaa sidoo kale hadda ku sugan Garowe, kuwaas oo ka mid ahaa wufuuda, waxaana loo badinayo in ay dibedda wax kaga biirin doonaan shirka oo ka duwan kuwii hore.
Xildh. Cabdifataax “Sharciga doorashadu wuxuu eg yahay shaar qof toshay oo madaxweynuhu rabo inuu talada ku sii joogo”